Fonenana any Bali " Journey-Assist - Manofa. Villa. Bungalow. Hotel.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Akomoditra ao Bali
Akomoditra ao Bali. Hotely, trano fandraisam-bahiny, sns.
Torohevitra momba ny trano fonenana ao Bali
Afaka mahita trano hofan-trano any Bali ianao rehefa avy any amin'ny nosy. Amin'ity toe-javatra ity, ny algorithm amin'ny hetsika dia tokony ho toy izao manaraka izao:
Fijanonana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny mandritra ny andro vitsivitsy. Any Bali, dia maro be ny tolotra omeny. Matetika 3 andro dia ampy hitadiavana safidy teti-bola amin'ny fialan-tsasatra.
Avy eo dia tsara indrindra raha mifandray amin'ny iray amin'ireo mpandraharaha finday Indonezia hiantso ireo tompon-tany.
Aorian'izany dia araraotina ny manofa fiara amin'ny fiakarana ao amin'ny nosy. Ny safidy ara-teti-bola betsaka indrindra dia bisikileta.
Mividiana gazety misy dokam-barotra amin'ny fanofana trano. Misy teboka amidy, ohatra, isaky ny fivarotana lehibe. Ny doka dia mirakitra ny angona rehetra momba ny efitrano, trano sy hotely any Bali. Misy ihany koa ny takelaka fampandrenesana eo akaikin'ny kafe sy trano fisakafoanana. Ohatra, any Ubud akaikin'ny trano fisakafoanana any Bali Buddha dia misy iray. Misy koa ny takelaka fampandrenesana amin'ny arabe lehibe eo akaikin'ny paositra. Ny fifandraisana dia aseho isaky ny doka, toy ny masontsivana fonenana, saingy matetika tsy aseho ny vidiny, noho izany antony izany no ilana fifandraisana manokana amin'ny tompon-trano hahitana ny pitsopitsony rehetra.
Inona no tadiavina raha te-hanofana ela isika?
Mba hisorohana ny hadisoana rehefa misafidy sy hahazoana fialan-tsasatra avo lenta amin'ny fampiononana, mila mandinika tsara ireo antsipiriany ireo ianao:
Toetran'ny tafo - raha tsy mahafapo ny toe-pahasalamany dia azo atao ny tondra-drano mandritra ny vanim-potoana orana.
Ny fanjakana fifandraisana. Raha misy ny tsy fahampiana dia tsy tokony hofanina.
Ny fanofana voasoratra dia tokony hosokafana.
Alohan'ny handoavana, alao ny antontan-taratasin'ny tompona.
Aorian'ny fandoavam-bola dia ilaina ny mitazona ny fizahana tsirairay, mitaky ny fandraisana ara-bola amin'ny tompony, izay manamarina ny fahitana vola amin'ny mpanofa.
Ny fiandohana dia tokony hiresaka momba ny vidin'ny fitaovana.
Zahao ny toe-javatra misy ny làlan'ny fifamoivoizana akaikin'ny trano.
Tsara homena ny fanakarama aloha mandritra ny 2 andro aloha. Izany dia hanome antoka momba ny fampiononana. Avy eo dia afaka mandoa andro hafa ianao ary mandany ny fialan-tsasatrao amin'ny toe-tsaina.
Misafidy hotely iray any Bali
Ilaina ny mandinika tsara ny fomba fijery avy amin'ny varavarankely ary amin'ny fahatongavan'izy ireo izany. Ny efitrano sasany dia tsy misy varavarankely mihitsy. Ny fomba fijery avy eo amin'ny varavarankely dia mety ho samy hafa: ranomasina, tokotanika, dobo, zaridaina sns.
Tsy tokony hadinontsika ny momba ny mari-pana. Ity dia singa iray manan-danja amin'ny fiainana milamina ao amin'ny nosy, voalohany - hatramin'ny Novambra ka hatramin'ny Aprily, satria ity vanim-potoana ity dia miavaka amin'ny hamandoana avo any Bali, noho izany ny fanamainana dia afaka manamora ny ambiny.
Misy vidin'ny hetra ve ny efitrano? Tsy ny trano fandraisam-bahiny rehetra dia mampiseho avy hatrany ny vidiny farany. Mba hisarihana olona mety hitranga amin'ny ambaratonga voalohany, ny vidiny dia voalaza, tsy sandan'ny hetra.
Misy ny fandroana ao amin'ny efitrano misy ny sakafo maraina. Amin'ity nosy ity, ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny dia ahitana ny sakafo maraina amin'ny saran'ny efitrano fandraisam-bahiny. Saika ny trano fandraisam-bahiny rehetra dia manana trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana marobe manolotra lovia isan-karazany, ao anatin'izany ny laisoa nasionalina. Matetika ny vidiny dia ambany noho ny trano fisotroana trano fandraisam-bahiny. Na izany aza, raha ny sakafo maraina dia tsara kokoa ny mitondra azy any amin'ny hotely, mora kokoa sy mora kokoa.
Mampiavaka ny toerana misy ny hotely. Ao amin'ny tranokala, indraindray tsy aseho ny mombamomba ny tena toerana iray trano fandraisam-bahiny iray, ka tsara kokoa ny manamarina ny adiresy, ohatra, mampiasa sarintany ao amin'ny Google. Tena manan-danja izany raha toa ka eo akaikin'ny lalana be arakaraka, lalana disco na alina voalohany amin'ny ranomasina ny andrimpanjakana.
Daty fananganana sy fanamboarana farany ilay trano trano fandraisam-bahiny. Manerana an'i Azia Atsimo Atsinanana, ny toeran'ny hotely dia voafaritry ny daty nananganana azy. Ny ho fohy kokoa ny tranobe, ny tsara kokoa. Any Bali, lavitra ny toerana rehetra, ny fanamboarana kosmetika dia atao isan-taona. Tamin'ny voalohany, ho toy ny fitsipika, dia mihalevona ny trano fandraisam-bahiny, aorian'izay dia tanterahana ny famonoana lehibe. Na izany aza, mihatra indrindra amin'ny hotely hotely mihintsy. Ry malala, matetika dia manamboatra ara-potoana.
Ny fisian'ny efitrano Internet dia tokony hazavaina mialoha, satria lavitra be na aiza na aiza ao Bali.
Ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny nosy Bali dia asehon'ny karazan-tany maro. Misy safidy azo alaina isan-karazany, azo avy ao amin'ny efitrano mankany amin'ny villa iray misaraka. Ny vidin'ny hofan-trano dia miankina amin'ny lafin-javatra toy ny fiainana, ny trano fonenana, ny halaviran'ny ranomasina, faritra manokana any Bali, karazana fananana ary ny fomba fandoavam-bola. Misy ny nuances sasany tsy dia fantatra amin'ny mpizahatany tsy manam-pahaizana.
Karazana trano ao Bali
Ao Bali, afaka mahita trano fandraisam-bahiny, villa, bungalow ianao. Malalaka be ny safidin'ny trano, ka noho ny teti-bola rehetra azo atao ny misafidy ilay safidy mety. Raha atambatra, sokajy 7 trano fonenana trano no nampiavaka:
trano fonenana manokana;
Tsy ny karazan-trano ihany no vidiny. Ny faritr'i Bali, ny halaviran'ny ranomasina, ny fitaovana teknika, ny faritra, ny fanaka dia zava-dehibe. Ny olana momba ny fanofana trano dia tokony hafangaro aloha, satria, na eo aza ny safidy malalaka, mazàna, antsasaky ny safidy rehetra, farafahakeliny, na voakarama amin'ny fotoana rehetra.
Ahoana ny fomba hahitana trano fonenana ao Bali
Misy fomba maro hahitana sy hisafidianana trano honenana eto. Ny fomba tsotra indrindra dia ny fampiasana tranokala natokana ho an'ny trano toy ny Airbnb, BaliAdvertiser, RumahDijual.
Raha ny tsy azo heverina trano intsony any Bali amin'ny alàlan'ny Internet, dia azo atao ny mampiasa serivisy mpanelanelana. Misy mpiantoka ampy ao Bali, ao anatin'izany dia misy tsara, afaka mifidy haingana ny safidy tsara indrindra. Ny tompon'antoka maro dia manan-jo hanome fihenam-bidy, indrindra rehefa aloa mandritra ny volana iray ny fandoavam-bola mandritra ny volana (na fotoana maharitra ela).
Amin'ny tranga tena henjana dia afaka manandrana mitady trano eny an-toerana ianao. Mila mandinika ireo trano izay mihantona ny sonia For Rent ianao. Afaka manontany eo an-toerana ianao ary mitady doka amin'ny gazety eo an-toerana. Somary mandreraka be izany, nefa matetika dia mitondra valiny mahomby. Fa tsy maintsy mahatsiaro fa ny mponina any an-toerana dia mandoa ny vidin'ny trano fividianana trano. Noho izany, aza gaga raha mahita na dia ao an-dàlana aza dia eo ho eo ihany ireo trano fonenana misy fahasamihafana amin'ny vidin'ny fanofa, ohatra, $ 100 isam-bolana.
Vidiny ho an'ny trano fonenana any Bali
Ny tompon-trano any Bali dia aleony manofa azy mandritra ny hofan-trano maharitra, ka ny vidin'ny 1 volana dia miovaova isam-bolana sy tapany. Antony hafa:
Faritra Bali. Ny trano lafo indrindra dia ny any Sanur, Nusa Dua ary Canggu. Ny salan'isa antonony dia any Kuta, Umalas, Seminyak, Kerobokan ary Ubud. Ny trano mora vidy indrindra dia ny avaratry Bali sy any Jimbaran.
Ny halaviran'ny trano fonenana ka hatramin'ny morontsiraka. Ny trano misy fahitana ranomasina dia lafo kokoa. Villa sy bungalow matetika no eo akaikin'ny moron-dranomasina. Arakaraky ny halavitry ny ranomasina no mampidina ny vidiny. Antony iray hafa amin'ny vidiny ny fisian'izay manintona akaikin'ny trano onenana.
Ny foto-drafitrasa any amin'ny faritra. Ny fotodrafitrasa fizahan-tany any Bali dia novolavolaina tsy an-drariny. Ny trano fisotroana kafe, tranobe, salon ary zavatra hafa mitovy eo amin'ny manodidina no misy fiantraikany amin'ny vidin'ny trano. Noho izany, ao Nusa Dua, ny vidiny avo dia avo ihany koa ho an'ireo tokantrano lavitra ny moron-dranomasina.
Sokajy trano. Ny trano sy ny villa dia karazana trano fonenana lafo vidy. Ny trano fandraisam-bahiny, trano sy efitrano dia misy teti-bola.
Faritra onenana sy isan'ny efitrano. Bali dia manana safidy miaraka amin'ny isan'ireo efitrano - 1, 2, 3, 4 na mihoatra. Azo atao aza ny manofa trano misy rihana 2 misy fandroana 2 na 3 sy terraces lehibe (mazava ho azy fa tsy ho mora io).
Fitaovana trano. Any Bali, tsy ny sehatry ny fiainana rehetra no manana kojakoja toy ny rano mafana, Internet, fifehezana rivotra ary fahita lavitra. Ny fisian'izy ireo no fototry ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Parking. Akaiky ny trano na villa matetika misy lalana 1 izay ahafahanao mamboly. Ny mahazatra dia ny trano sy ny villa misy garazy.
Ny fisian'ny dobo filomanosana iray.
Fiankinan'ny trano ankapobeny (hafiriana ny fanamboarana farany farany).
Ny fanofa-potoana. Ho an'ny fijanonana maharitra ela, ambany kely ny vidin'ny fanofa trano 1 volana. Raha mandoa ny fotoana manontolo ianao, dia misy fihenam-bidy lehibe.
Manofa trano any Bali
Ny trano dia sokajy trano fonenana malaza any Bali. Trano fandraisam-bahiny ahazoana aina izay misy ny kojakoja rehetra. Misy trano misy efitra fatoriana 2, 3 na 4 mihitsy aza, misy rihana 2, misy efitra fandroana maromaro, dobo filomanosana. Ny faritry ny trano sy ny fandaminana azy no mamaritra ny vidiny. Ny faritra sy ny halaviran'ny morontsiraka dia zava-dehibe ihany koa. Matetika ny herinandro farafahakeliny fanofana trano dia herinandro.
Ny trano tsy miankina Bali no hofan-trano dia misy ny fifandraisana rehetra: ny fividianana ny rano, ny rano (ao anatin'izany ny rano mafana), ny fidiovana, ny fandroana, ny fandroana, ny kojakojan-tokantrano. Tsy misy an-trano ny Internet, koa mila hazavaina mialoha ity entana ity. Ny saran'ny trano ambany indrindra dia $ 80 isan'andro. Raha ny fanofana iray volana na mihoatra dia ahena ny vidiny isan'andro. Ny vidin'ny fanofana dia tsy misy faktiora ilaina, ka mila manamarina amin'ny tompony ianao izay handoa izany. Tsy maintsy atao ny mamarana ny fifanarahana fifanarahana fifanarahana an-tsoratra, izay tokony hanome antsipiriany ny fehezan-dalàna momba ny fifanarahana amin'ny antsipiriany rehetra.
Ny vidin'ny fanofana trano dia miankina amin'ny faritra. Na izany aza, ny Balizy dia matetika manisy vidiny tsy misy vidiny, koa any amin'ilay tanàna iray ho an'ny vidin-javatra mitovy dia misy safidy hafa samihafa amin'ny fanofa trano.
Villa any Bali. manofa
Ny villa no sokajy fampiantranoana malaza indrindra any Bali, nefa koa ny lafo indrindra. Ny fe-potoana fampanofana dia mety ho 1 andro, ary mety haharitra araka izay itiavanao azy. Misy villa $ 70 sy $ 500 isan'andro. Izany dia faritan'ny faritra sy ny toetran'ny onenana. Misy tolotra be dia be foana. Afaka mahita villa hofaina amin'ny tranokala manokana ianao na miaraka amin'ny fanampian'ny mpanampy trano. Ny vidin'ny fanofana dia mamaritra ihany koa amin'ny halaviran'ny ranomasina, ny fisian'ireo manintona eo akaiky eo ary ny serivisy fanampiny.
Ny villa mazàna dia manana efitrano fandraisam-bahiny roa na mihoatra, efitrano malalaka misokatra misy habe lehibe, natambatra amin'ny lakozia, patio, terasa. Mety misy dobo sy zaridaina eo akaiky. Ny villa sasany dia diovina imbetsaka isan-kerinandro, fa ny sasany kosa misakafo maraina. Ny fanofana maharitra ela indrindra amin'ny villa dia azo atao amin'ny vidiny 400-800 dolara isam-bolana. Raha toa ianao ka mandoa ny vola rehetra amin'ny fotoana iray dia azo ahena ny vidiny. Rehefa manofa trano tsy misy mpanelanelana, dia mety tsara mihitsy ny fifanarahana miaraka amin'ny tompony.
Ny safidy ny manofa trano villa dia mety ho an'ireo manana fahaiza-miaina tsara ara-bola. Ao Bali dia misy villa tena kely, ary penthouse lehibe, izay afaka mandray trano maro.
Efitra ao amin'ilay villa sy amin'ny trano honenana
Ity dia safidy tsy mora vidy, matetika ampiasaina amin'ny fanesorana fotoana fohy. Homestay dia hotely trano fandraisam-bahiny. Ny efitrano dia mety ho ao amin'ny villa rehefa mijanona amin'ny tompona, ao anaty trano fonenana iray misy vavahady misaraka sy amin'ny trano tsy misy tompony.
Ity safidy ity dia mety ho an'ny mpizahatany manana teti-bola maotina. Ny efi-trano matetika dia somary mendrika, misy ny aircon sy ny fanaka napetraka ao anatiny, ary matetika koa misy efitra fandroana misaraka. Ny efitra fandraisam-bahiny sy ny lakozia nozaraina. Hofanina ireo efitrano ireo - manofa ny villa iray manontolo ny mpizahatany, miaina ao amin'ny iray amin'ireo efitrano ary manofa ny ambiny. Matetika azo atao ny manofa ny gorodona manontolo amin'ny fivoahana misaraka.
Ny vidin'ny trano trano dia voafaritry ny toetra mampiavaka ny efitrano nohofana sy ny villa. Ny vidiny antonony dia manodidina ny $ 120 isam-bolana. Azo atao ny mahita efitrano ao amin'ny Airbnb sy loharano hafa mitovy amin'izany natokana ho an'ny trano fanofana.
Ny trano fandraisam-bahiny dia trano fandraisam-bahiny manana efitrano 40. Safidy mora vidy ihany koa io. Ny efitrano iray ao amin'ny trano fandraisam-bahiny any Bali, amin'ny tranga mahazatra, dia manondro ny fisian'ny fandriana, ny fividianana rivotra, ny fahitalavitra, ny Internet, ny teras kely iray. Fandroana sy lakozia - iray isaky ny gorodona na iray aza ho an'ny trano fandraisam-bahiny iray manontolo. Amin'ny trano fandraisam-bahiny tsara, manadio isan'andro izy ireo ary manome sakafo (amin'ny tranga faran'izay kely - sakafo maraina). Ny vidiny ambany indrindra amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia $ 7 isan'andro, ary any Kuta sy Nusa Dua dia tsy latsaky ny $ 10 isan'andro.
Ny fanofa trano isan'andro amin'ireto efitrano ireto dia noinaina, satria miova ny mpiara-monina matetika. Azo inoana fa tsy maniry zavatra ianao ary te-hiroso haingana. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny maro, ny vahiny dia mandoa herinaratra sy rano fanampiny.
Trano fandraisam-bahiny Bali
Ny efitrano misaraka dia trano kely misy ny kojakoja rehetra. Safidy trano lafo vidy hafa koa ity mety amin'ny budget kely. Ireo trano matetika mazàna no misy ny kojakoja rehetra: fifehezana rivotra, kojakoja fanaka, kojakojan-tokantrano, famatsian-drano mafana, internet. Ny vidiny kely indrindra dia $ 300 isam-bolana. Afaka mahita safidy mora vidy kokoa ianao indraindray, nefa tsy misy mari-pana.
Bungalow any Bali
Ny bungalow dia azo antsoina hoe kinova fahavaratra amin'ny villa. Ny mampiavaka azy dia ny fitambaran'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny terraska, ny veranda lehibe, efitrano 1 na 2. Tsara ho an'ny fanofana maharitra, fa tsy ho an'ny fijanonana maharitra. Ny bungalow dia miorina eo amoron'ny morontsiraka, noho io azo atao ny mankafy ny ranomasina. Ny vidiny kely indrindra ho an'ny bungalow dia $ 50 isan'andro, saingy misy safidy ho an'ny $ 300-500 isam-bolana, ao anatin'izany ny pisinina, efitrano fatoriana maro ary zaridaina.